ရင်နင့်ကြွေ (၃) — Steemit
ရင့်နင့်ကြွေ (1)အားဖတ်ရူ့ပါရန် link✅
ခေါင်းမာလှသော သမီးအား ချော့ချော့မော့မော့ ပြောဆိုရပေအုံးတော့မည်ဟု ဒေါ်မိုးမိုး သက်ပြင်းချ တွေးမိလေသည်။
ညဘက်ရောက်တော့မှ သမီးကို ခနခေါ် တိုးတိုးတိတ်တိတ် မေးရလေတော့သည်။
"သမီး ညည်းယောက်ျား သူ့အိမ်ပြန်မှာ ညည်းခေါ်နေတာဆို”
"ဟုတ်တယ်လေ အမေရယ် သူက နိုင်ငံခြားသွားမှာတဲ့ ကျုပ်က သူ့အိမ်က ဟာတေနဲ့ မနေချင်ဘူး အမေရယ် ကျုပ်ဟာကျုပ် ဒီမှာပဲ နေမယ် သူ့သူ သွားပါ့လေ့စေ”
"အော် ဒုက္ခ ငါ့သမီးရယ် ယောက်ျား ယူပီးမှတော့ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် ခွဲနေမလား နေရမှာပေါ့အေ ယောင်နောက် ဆံထုံးပါဆိုတာ သမီး ကြားဖူးသား မဟုတ်လား မရဘူး လိုက်ချင်ချင် မလိုက်ချင်ချင် လိုက်သွား ဘယ်နဲ့အေ ယူထားတာ လပိုင်းရှိသေးတာကို..”
ဒေါ်မိုးမိုး တစ်ယောက် သမီးဖြစ်သူအား ရှည်လျားစွာ ဆုံးမစကားပြောဆိုရင်း သမီးဖြစ်သူအား ကြည့်ရင်း မိမိပါ ဝမ်းနည်းလာလေသည်။ မိမိတို့မှာ သမီးလေးတစ်ယောက်သာ ရှိသည်မလို့ မျက်စိအောက်မှာ ထားချင်ပေသိ ဆိုင်သာဆိုင်လျက် သူမကို သူမ ခင်ပွန်းက ပိုင်သည် မဟုတ်ပါလား..။
သူတို့ မသွားခင်ညကျတော့ အမေနှင့်အဖေအား ရှိခိုးကြရင်း စကားစမြည်ပြောဆိုနေကြလေသည်။
ထိုစဉ် ဌေးဌေးဦးမှ ...
"အမေ ကျုပ် မောင်လေး ခေါ်သွားမယ်တော် ကျုပ်တစ်ယောက်တည်း လိုက်သွား ပျင်းစရာကြီး မောင်လေးပါ အဖော်ရတာပေါ့ ...”
"သမီးရယ် ညည်းမောင်လေး ကျောင်းတက်နေတာကိုအေ”
"အမေရယ် သူတို့ သတင်းကျွတ်ကျောင်းရက်ရှည်လဲ ပိတ်တော့မှာကို ပြီး ကျုပ် ပြန်လိုက်ပို့မှာပေါ့ ”ဟု ပြောရင်း တဆက်တည်း
"ဖိုးသား မောင်လေး မမနဲ့ လိုက်မယ်မလား ”ဟု လှည့်မေးရာ
"ဟုတ် လိုက်မယ် မမ...တကယ်ခေါ်မှာနော် ”ဟု ပြောရင်း သားအငယ်ကောင် ပျော်နေလေသည်။
"အေးလေ သားပါပါတော့ သေချာ ရောက်မှာပေါ့ ”ဟု တွေးရင်း သားငယ်ကို သမီးတို့ လင်မယားနှင့် ထည့်ပေးလိုက်လေတော့သည်။
သားနှင့် သမီး မရှိတော့ ဒေါ်မိုးမိုးရော ဦးမောင်ဦးရော စိတ်ထဲ လစ်ဟာနေကြသည်။ ဖုန်းဆက်ရန်ကြတော့ သားမက်ရွာ ခေါင်လှပေသည်။ ဖုန်းလိုင်းပင်မမိ..။ သမီးရော သားပါ အလွန် သတိရလှပြီ ဘုရားရှိခိုးရင်း သားနှင့် သမီး ကျန်းမာချမ်းသာကြစေကြောင်း ဆုတောင်းရင် တစ်ညပြီး တစ်ည ကုန်လေသည်။ ဘာလိုလိုနှင့် သမီးတို့သွားပြတာ ၁၀ရက်ခန့်ပင် ရှိလေပီ မဟုတ်ပါလား..။
တစ်ရက် ဒေါ်မိုးမိုး အလုပ်က ပြန်အလာ အိမ်တံခါးကြီး ပွင့်နေလေသည်။ အိမ်ထဲမှ ...
"အမေ...”ဟုသော ခေါ်သံနှင့်အတူ သားပြေးထွက်လာလေသည်။
" ဟော်တော် ငါ့သားလေး ပြန်လာပြီလား မင့်မမကော ပါလား”
" ပါတယ် အမေ သားနဲ့ မမပဲ ပြန်လာတာ ကိုကြီးပြန်မပါလာဘူး”
" အေးအေး သား ” စကားပြောရင်း သားငယ်အား ထွေးပိုက်ထားမိသည်။
အိမ်ထဲရောက်တော့ သမီးဖြစ်သူ ပင်ပန်းလာလေသလားမသိ အိပ်ပျော်နေလေသည်။ သားဖြစ်သူအား တီးတိုးမေးကြည့်မိရပြန်သည်။
"ငါ့ သား မင်းအမနဲ့ သူ့ယောက်ျားရယ် သားရောက်တဲ့ အိမ်ကလူတွေအကြောင်း အမေ့ပြောပါအုံး”
"ဟုတ် ကိုကြီးနဲ့ မမက ခနခန ရန်ဖြစ်နေကြတယ် အမေ ပြီးတော့ သားပြန်လိုက်ပို့မယ် ဆိုပြီး ပြန်လာတာ”
"ကိုကြီးက သူရောလိုက်မယ်ပြောတာ မမက နေခဲ့ခိုင်းတာ အမေ...”
"အမေ ကျုပ် ရွာထဲ သူငယ်ချင်းတွေဆီသွားအုံးမယ်...”ပြောရင်းဆိုရင်း သားဖြစ်သူ အိမ်အပြင်ဘက် သို့ ပြေးသွားလေတော့သည်။
အိမ်း....သမီးနိုးလာမှပဲ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်မေးရတော့မည်။အေးလေ ၇နှစ်သာ ရှိသေးသော သားက ဘယ်လို လုံးစေ့ပတ်စေ့ ပြောနိုင်ပါ့မလဲ.. တွေးရင်း ဒေါ်မိုးတစ်ယောက် သားနှင့်သမီး ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ စားရန် မီးဖိုချောင်ဝင်လေတော့သည်။
​ပြောပါ မမ​ရေ ​စောင့်​​နေတယ်​ 😊😊
သိချင်နေပါဘီဆို နည်းနည်းလေးပဲ ရေးတယ် မမဆိုးတယ်..။
ခ်ခ် ဒလို ဆွဲခေါ်ရတေ😁😁နောက်ပတ် ဖတ်ပေးအူး😁
ဟု ပဲ မမက. နည်းနည်းယေးပဲရေးတယ်😄
အဟတ်​...မကြည်​တိုက မိုက်​တယ်​ korea ကားလိုဘဲ အဟီးးးးး
အဟတ် ဒလိုဖဲလေ မတ်မတ်ပါဆိုနေ😁
အင်း ယွန်းရေ နောက်ပတ် ဆက်ဖတ်ပေးပါအုံး😁
အိမ်း ...တစ်ခုခုတော့ ပြဿနာ အကြီးအကျယ် ထင်ပ
ဟုတ်တယ်ဆို ဆက်တော့ လာဖတ်ပေးပါအုံးနော့😁
ဒေါါ်မိုး သားသမီးအပေါ် ထားတဲ့ မေတ္တာတွေ တွေ့ မြင်ရပါတယ် မမ
စိတ်ကစားပြီး အိမ်ထောင် ပြုတယ် အာ့က ပြသနာပါပဲ😁
ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းလေးကို သိချင်ပါသော်လည်း စာရေးသူက ကိုရီးကားတွေ ကြိုက်တတ်သူဖြစ်နေသောအခါ ဒီလို ပုံစံနဲ့ နောက်တစ်ပိုင်းမျှော်ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာပေါ့။စာဖတ်သူတွေကလည်း ဒီလို အပိုင်းတွေအများကြီးနဲ့ ကိုရီးယားကားတွေ ကြည့်ဖူးတဲ့ အတွေအကြုံရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လေးစားလျက်
ဟုတေမလား 😁ဟာ..ဆိုရင် နောက်တစ်ပိုင်းစောင့်တော့လေ ကလိကလိနက် ကျန်ခဲ့ရော..မမက အာ့လောက် မဟုတိပါဘူးလေ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါလို့☺
အော် အိမ်ပြန်လာကြပြီးပေါ့သူမောင်လေးကိုပြန်လာပိုတယ် . ခနခနရန်ရန်ဖစ်ရတာကဘာဖိလို့မမ
ဟုတ်တယ် ဦးထွေးရေ သားသမီးကောင်းပဲလိုချင်လို့ လောကကြီးက မပေးဘူးရယ်😊
ဖုန်း လင် ပြသနာနေမယ်
အရေးအသားတွေကို အရမ်းတိုးတတ်လာပြီး စာဖတ်သူကို ဆွဲဆောင်နိင်လာပြီးနော်မကြည်
မိသားစု ဒုက္ခတွေ ဆက်လက် အားပေးနေပါ့မယ်
ဖတ်‌ရတာ ရင်‌ထဲ မ‌ကောင်းလိုက်‌တာ။‌နောက်‌အပိုင်း ကျွန်‌‌တော်‌မလာ‌တော့ဘူး‌နော်‌။ကြို ‌ပြောထားတာ။‌ရေးချက်‌က ထိတယ်‌။
ငိုရမဲ့အခန်း မရောက်သေးဝူး ဆရာရယ် လာဖတ်ပါအုံးလို့😞
အင်း ဆက်ဆက် လာဖတိပေးပါအုံး ညီမ
ခြိုးခြံခြွေတာနိုင်လေလေ good လေလေပါ